Izindlela Ezi-9 Zokusakaza Imicimbi Yakho Ye-B2B nge-Event Tech | Martech Zone
Izindlela Ezi-9 Zokusakaza Imicimbi Yakho Ye-B2B nge-Event Tech
NgoLwesibili, Septhemba 26, 2017 NgoLwesibili, Septhemba 26, 2017 UMichael Doane
Okusha Kusitaki Sakho SikaMartech: I-Software Management Software
Abahleli bemicimbi nabakhangisi kuningi okumele bakwenze. Ukuthola izipikha ezinhle, ukunqamula okuqukethwe okuhle, ukuthengisa uxhaso, nokuletha umuzwa ovelele wababekhona kubandakanya amaphesenti amancane emisebenzi yabo yansuku zonke. Noma kunjalo, yimisebenzi ethatha isikhathi esiningi.
Kungakho abagqugquzeli bemicimbi ye-B2B beqhubeka nokwengeza i-Event Tech esitaki sabo seMartech. KwaCadmiumCD, sichithe iminyaka engaphezu kwengu-17 senza futhi sipholisha izixazululo ezingcono kakhulu zesoftware yezinselelo ezihlukile zabahleli bemicimbi.
Namuhla, sizodiliza izinqubo ezimbalwa abahleli bazo abangazilungisa nge-Event Tech.
1. Qoqa uphinde ubuyekeze ukuthunyelwa kwenkomfa
Enye yezinselelo ezinkulu abahleli bemicimbi ye-B2B ababhekene nayo ukunciphisa okuqukethwe okuhle. Sifuna izikhulumi ezigqugquzela isenzo, ezifundisayo, nezijabulisa ababekhona. Kubalulekile ukuthi isethulo ngasinye sezipikha sisezingeni elifanele ngomsebenzi wethu.
Ukubeka ucingo lwamaphepha kuyindlela enhle yokuqinisekisa okuqukethwe okuhle ngomcimbi wakho. Ukuphatha konke lokho kuthunyelwe, noma kunjalo, akulula.
Yilapho i-Event Tech ingena khona. Ukungeza okuthunyelwe nokubuyekezwa kwesoftware, njenge I-Scorecard, esitaki sakho seMartech kuyindlela enhle yokuphatha konke ukuthunyelwa ozokuthola.
Ungaphinda uhlanganise ikomidi lochwepheshe bemboni abangabuyekeza okuthunyelwe futhi bancome okuqukethwe. Nayi i-athikili mayelana ukuthi umsebenzisi oyedwa ulinyuse kanjani izinga lokuphendula kwakhe laya ku-100%
2. Phatha lezozipikha ze-Pesky
Lapho usukhethe okuqukethwe komcimbi wakho, inselelo elandelayo ukuthi ukuphatha izipikha. Izipikha zidume kanzima ukuphatha. Ukulandelela ukuthunyelwa nge-imeyili nangamaspredishithi kuyindlela eyodwa yokukwenza, kepha akulungile.
Into ukuthi, izikhulumi zimatasa. Imvamisa bangongoti emkhakheni abawunikiwe, futhi banomsebenzi omkhulukazi ongahambisani nomcimbi wakho. Imvamisa, abakhokhelwa ngisho nokukhuluma emcimbini wakho.
I-Event Tech efana ne- Umvuni Wenkomfa ingakusiza ukulandelela okuhanjiswa nokulandela izipikha zakho ngempumelelo. Izipikha zizokuthokozela lokho, ngoba bathola uhlu lwemisebenzi olula bona (noma abasizi babo) abangaluqedela ucezu oluthile.
3. Hlela & Hlela Izikhathi
Amaspredishithi nawo angasiza hlela futhi uhlele izikhathi zakho, kodwa futhi, akulungile. I-Event Tech ikuvumela ukuthi uhlele futhi wakhe isheduli kokuqukethwe okukhethile ngesikhathi senqubo yakho yokubuyekeza. Ungabela izipikha emakamelweni ezethulo futhi uphathe imininingwane ngohlelo lokuphathwa kokuqukethwe komcimbi.
Ingxenye enhle kunazo zonke ukuthi lokhu kuvuselela okuqukethwe kuwebhusayithi yakho yomcimbi nakuhlelo lokusebenza lomcimbi, ngakho-ke ababekhona njalo banokufinyelela kokuqukethwe kwakamuva nohlelo.
4. Thengisa Booth Space & Sponsorships
Ngemicimbi eminingi ye-B2B, imali engenayo inenye yezimpawu ezibaluleke kakhulu zempumelelo. Lokhu kuvame ukufaka ukuqhuba umbukiso wezohwebo noma ukuthengisa amathuba abaxhasi. Lezi kungaba izikhangiso zesibhengezo esilula kuwebhusayithi yakho yomcimbi, iseshini exhasiwe, noma ihluzo ebhasini lakho lokuhamba. Abahleli beDigital noma cha - abahleli bomhlangano bafuna ukukhulisa imali yabo nganoma yiziphi izinsiza abanazo.
Inselelo ukuthi lokhu kufaka ingcindezi eyengeziwe kuwe naseqenjini lakho lokuthengisa. I-Event Tech inciphisa leyo ngcindezi. UJackie Stasch, iMenenja Ephakeme Yezobudlelwano Benkampani, isibonelo, usebenzisa i-Expo Harvester ukwenza kuzuzwe impumelelo yokuthengisa ye-expo.
Ababonisi bayakwazisa ngoba bangathenga indawo yamadokodo nezinto zokuxhaswa, bese bethumela abahleli bezimpahla abasizayo abazidingayo kubo, konke endaweni eyodwa. Kwabahleli, lokhu kuyindawo ephelele yokulandela umkhondo wokukhishwa nokugcina amathebhu kumaphi amathuba abawathengisile.
5. Phatha Ezokuxhumana Ngaphambi, Ngesikhathi, Nangemva Komcimbi
Ngaphezu kokulandela izikhulumi nababonisi mayelana nokuthi yimiphi imisebenzi efanelekile, kubalulekile ukuba nesiteshi esiqondile sokufinyelela ababekhona. I-Event Tech iza namathuluzi wokuxhumana akhelwe ngaphakathi njenge-imeyili nezaziso zohlelo lokusebenza ezingaphakathi nohlelo. Ungahlukanisa izingxenye ngokuya ngemisebenzi eqediwe bese uthumela imiyalezo ngezifanekiso ze-imeyili ezakhiwe ngaphambilini.
Kukhona namathuluzi afana ne- umcimbiScribe Boost evumela abahleli ukuthi baxhumane nabasebenzi kanye nabanye ababambe iqhaza kusayithi, banikeze izikhulumi ukufinyelela kumathuluzi athuthukisiwe okuhambisa okuqukethwe ngomzuzu wokugcina, nokuthumela imiyalezo kwababekhona lapho uhlelo luguquka.
6. Bandakanya Ababekhona Emisebenzini Esizeni
Ukuzibandakanya yigama eliyizwi elikhulu labahleli bemicimbi kulezi zinsuku. Futhi into abathengisi abayifisayo. Ukushayela izenzo ezilandelwayo kukhombisa ukuthi izinhlelo zakho ziyasebenza. Ukuxhumana nokuqukethwe kwakho nababambiqhaza kukhombisa i-ROI kubabambiqhaza bangaphakathi nabangaphandle.
Nazi izindlela ezimbalwa ezisheshayo zokungeza i-Event Tech esitaki sakho seMartech kungasiza ukubandakanya abakhona:
Shayela i-trade show booth traffic nge ukuzingelwa kwabadla izambane likapondo.
Khulisa ukutholwa kohlelo lokusebenza nge- indlela yokuthengisa yeziteshi eziningi ye-Event Tech.
Yabelana ngolwazi lwenkomfa bese ushayela ngezenzo ezithile nge izimpawu zedijithali.
Thola imiphumela yesikhathi sangempela nokuxhumana nayo uhlelo lokuphendula izilaleli.
7. Yabelana ngokuqukethwe nababekhona
Abakhangisi bayalazi inani lokuqukethwe. Abathengisi abasebenzisa imicimbi ye-B2B njengengxenye yamasu abo bayazi ukuthi okuqukethwe okuningi kwenzeka ngesikhathi sangempela emicimbini. Ukuba nendlela yokuthwebula nokusabalalisa lokho okuqukethwe kwababekhona nakwabangekhona ngokufanayo kubalulekile.
Ukungeza i-Event Tech njengeNqubo Yenkomfa kumcimbi wakho, bese wabelana amavidiyo anomsindo ovumelanisiwe namaslayidi nge-database yakho kuyindlela enhle yokwenza lokhu. Ukuba nesiteshi sokusabalalisa esifana ne-eventScribe Websites and Apps nakho kubalulekile.
Ababekhona abaningi bazobe sebevele balulanda uhlelo lokusebenza, ngakho-ke okumele ukwenze nje ukuthumela isaziso se-push noma i-imeyili ne-voila !, ababhalisile bakho banokufinyelela okusheshayo kukho konke okuqukethwe kwakho kwengqungquthela. Kufana nokuthatha izikhathi zakho zenkomfa bese uzibeka kabusha njengamashumi noma ngamakhulu ama-webinars!
8. Hlanganisa & Hlaziya Imiphumela
Imicimbi ehamba phambili ye-B2B yimicimbi eqhutshwa yidatha. Ukungeza i-Event Tech kusitaki sakho seMartech kungakusiza ukuletha ukuqonda okusha ekubikeni kwakho. Ukulandelela ukulandwa kohlelo lokusebenza, ukulayishwa kokuqukethwe, ukubalwa kwabantu, nokuningi kulula ngamathuluzi afana nalawa i-myCadmium, Ngokwesibonelo.
Ukuqoqa idatha efanelekile nenenani elivela kubahambeli nakho kwenziwa lula ngamathuluzi wokuhlola ingqungquthela afana nawo Ucwaningo Magnet. Abahleli bomcimbi nabakhangisi bangasebenzisa le datha ukudala imikhiqizo emisha, bathuthukise isipiliyoni sababekhona, noma banqume izidingo zokuqukethwe zemicimbi yabo yesikhathi esizayo.
9. Khetha Abamukeli Bemiklomelo
Izinhlelo zemiklomelo nazo ziyingxenye enkulu yemicimbi ye-B2B. Ukukhomba nokuqaphela abaholi bezimboni, isibonelo, kuyindlela enhle yokuba umholi wokucabanga futhi usungule ukufaneleka emcimbini wakho we-B2B. Inselelo ukuhlunga kukho konke ukuthunyelwa nokukhetha abantu abafanele.
I-Event Tech, njenge-Award Scorecard, iyisengezo esihle kwisitaki sakho seMartech. Ivumela abahleli nabathengisi ukuthi phatha ukuhanjiswa, nika amajaji ukuthi abukeze amaqembu futhi akhethe abamukeli ngokuya ngempendulo ehlanganyelwe.
Njengomhleli womcimbi noma umakethi, usuvele unokwanele ongakhathazeka ngakho. Ukungeza i-Event Tech kusitaki sakho seMartech kuyindlela enhle yokuqoqa, ukuphatha, nokwabelana ngokuqukethwe nabo bonke ababambiqhaza ababandakanyekayo.
I-Event Tech iletha imicimbi yakho ye-B2B ndawonye, ​​yenza lula imisebenzi yakho yokuhlela umcimbi nokonga isikhathi nenhlangano yakho.
Thola i-Quote Yomcimbi Wakho Olandelayo
Tags: uhlelo lokuphendula izilaleliukuphathwa kwemiklomeloImiklomeloukuthengisa kwamadokodocadmiumcdimiklomelo yenkomfaimpendulo yenkomfaumvuni wenkomfaukubuyekezwa kwengqungquthelaizethulo zenkomfaizimpawu zedijithaliimiklomelo yomcimbiukuphathwa kwemicimbiisoftware management imicimbieventscribe ukukhulisaphatha imicimbiukuhlela izikhathiukuzingela umkhwenyanaukuhlela iseshiniukuhlela iseshiniukuphathwa kwesipikaisikhulumi semakhadiumazibuthe wokuhlolavumelanisa amaslayidi
UMichael Doane ungumlobi, umakethi, kanye nomthuthukisi wewebhu othande imboni yemicimbi. Ngo- ICadmiumCD ufundisa abahleli bemicimbi ngezinzuzo ze-Event Tech. Thola ikhophi lakhe lamahhala Intuthuko Kwezobuchwepheshe Bomcimbi, ukuze ufunde ukuthi i-Event Tech ingayihlela kanjani imicimbi yakho ye-B2B.
Izinselelo Eziphezulu Eziyi-5 Zesevisi Yamakhasimende (Futhi Ungazilungisa Kanjani)